Wararka - Sidee loo adeegsadaa warqad jiingad ah oo carbide ah Mindiyo kala goynaya si sax ah?
1, Hawlgalka saxda ah ee hagaajinta garbaha wareegtada carbide ee haysta:
Hubi in maqaar-jeex-jeexa carbide-ga ah uu yahay mid xasillan, geesta midigtu ma tegi karto bidix ama midig ama kor iyo hoos uma boodi karto inta lagu jiro hawlgalka.
2: Aaladda wax lagu afaysto:
Afaynta mindiyaha waxaa lagu hagaajin karaa gacanta ama waa la habeyn karaa. Maaddada giraangirta shiidi waa inay la jaanqaaddaa baalasha dillaaca ee jiingadda ah, si loo gaaro af -haynta wax -ku -oolka ah
3: Qalabka qaboojinta aaladda:
Sababtoo ah sabuuradda kaarboorka ayaa weli leh heer -kood gaar ah marka loo wareejiyo mashiinka kala -goynta, iyo is -maandhaafka kaarboonka ayaa sababa tungsten carbides jiingad -jeexjeexay bladeedge si uu u kululaado. Cufnaanta midida darafkeeda ayaa saamaynaysa. Kartoonka jiingadda ah ee la jaray waa mid aan qurux badnayn. Ku qalabeysan qalab qaboojin si wax ku ool ah u hagaajin kara ifafaalaha aan fiicnayn ee gees goynta.
4: Ka fogow xabagta ku dheggan mindiyaha
Xabagta ku dheggan mindiyaha ayaa kordhin doonta dhumucda mindiyaha, kartoonnadana waxaa ku dhici doona khilaaf aan joogto ahayn, kaas oo sababi doona wax -soo -saar hoose oo saameeya cimriga. Qodobbada soo socda waxaad ka hortagi kartaa ifafaalaha:
a: Si habboon u yaree xaddiga xabagta ku jirta mashiinka wax -soo -saarka jiingadda.
b: Hubi in xabagta la mariyo meesha ugu sarreysa jiingada.
c: Hubi in meesha xabagta iyo koollada xabagta ay aad u badan yihiin
d: Si habboon u yareeya xawaaraha socda ee kaadhka, si xabagta si buuxda loo adkeeyo.
5: loox goynta salka:
Bakhtiinta dab -damiska ayaa lagu dhejin doonaa dhex -dhexaadinta looxa goynta saldhigga si loo jaro kartoonnada. Xaaladaha caadiga ah, cidhifyada goynta waa inaysan ku gelin faraqa in ka badan 10mm qoto dheer.
Ka soo iibso baaldiyo jeexjeex ah oo qaali ah soo -saare xirfadle ah - Zweimentool!
Waqtiga dhejinta: Aug-23-2021